Maxkamad ku taalla Kenya oo xukun ku riday Rag lala xiriirinayo Alshabaab. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Maxkamad ku taalla Kenya oo xukun ku riday Rag lala xiriirinayo Alshabaab.
Taliyaha Boliska ee Mandera, Fredrick Shisisa ayaa sheegay in 8 nin oo lala xiriirinayo Alshabaab inay u gudbiyeen Maxkamadda, isla markaana lagu riday xukun min 5 Sanno ah ama ay bixiyaan ganaax lacag oo dhan 400,000 Kenya Shillings.
Waxa uu sheegay inay Raggaasi ku qabteeen Hawlgalka lagu sugayo Ammaanka ee bilowgii bishan ka bilowday Gobalka W/bari, gaar ahaan inta u dhexeysa Degmooyinka Mandera iyo Ceel-waaq.
Taliyaha Boliska Mandera waxa kaloo uu tilmaamay in 3 ka mid ah 8-da Eedeysane ee la xukumay ay la Baarayaasha Boliska kala shaqnayaan sidii loo soo qaban lahaa xubno kale oo lala xiriirinayo Alshabaab, kuwaasi oo uu tilmaamay inay ku sugan yihiin gudaha iyo dibedda Kenya.
Waxa uu sheegay inay raggaasi horey taageero uga geysteen sidii loo qaban lahaa labo nin oo cunto u keeni jirey, waa sida uu hadalka u yiri.
Mar uu ka hadlayey dhinaca ammaanka, waxa uu sheegay inay Mandera deggan tahay, balse ay khatarta ka jirto inta u dhexeysa Deegaanka Ceel-waaq iyo Lafeey oo ku dhow Xuduudka.
Dhinaca kale, Taliyaha Boliska ee Mandera, Fredrick Shisisa waxa uu sheegay inay Saraakiisha Dembi-baarisra weli dabagal ku hayaan weerarkii ay Milliteriga Kenya bishii hore ee December 28-dii ku toogteen labo qof oo rayid ah oo ku sugnaa bartamaha Mandera.
Shirka Golaha Wasiirada ee maanta oo looga hadlay qodobo kala duwan
Madaxweynaha: “Waxaan ku rajo weynahay in natiijo lagu wada farxo ay ka soo baxdo Madasha Wadatashiga Qaranka ee Kismaayo”.